Indlu yeHolide ye-Il Ficodidia 1 - I-Airbnb
Indlu yeHolide ye-Il Ficodidia 1
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCaterina, Francesca E Antonio
Indawo entle ekwintliziyo edlamkileyo yelali yaselwandle yaseMarzamemi, amanyathelo ambalwa ukusuka elwandle kunye nezinyuko ezimbalwa ukusuka kwisikwere esiphakathi.
Jonga ividiyo yethu yentengiso: https://www.youtube.com/watch?v=iR1i3BoJRwQ
"I-Ficodindia" yenziwe ngamagumbi amabini azimeleyo axhotyiswe ngokupheleleyo, asanda kulungiswa, abekwe kumgangatho wesibini wesakhiwo esijongene nesinye sesona sitalato sisembindini welali, kwindawo ezolileyo kude netrafikhi.
Ngalinye kula magumbi mabini axhotyiswe ngayo yonke intuthuzelo kunye ne-air conditioning, kwaye iquka ikhitshi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela elineshawa, i-balcony, i-terrace. Intendelezo encinci, ebekwe kakuhle, iya kukuvumela ukuba ube nesidlo sakusasa kwindawo evulekileyo kwaye uphumle.
Ukongeza kwiibhedi ezimbini kwigumbi lokulala unokufumana iibhedi ezimbini ezingatshatanga ukongezelela. Esi sakhiwo sikweyona dolophana inabemi, kwaye sikufuphi nje neepizza, iindawo zokutyela, iibhari kunye necuba, ukutya kunye neevenkile zazo zonke iintlobo. Indawo yokupaka imoto inikezelwa yintendelezo ekhululekile ecaleni komnyango wokungena.
4.79 · Izimvo eziyi-20
Umbuki zindwendwe ngu- Caterina, Francesca E Antonio
Siya kuhlala sikhona ngexesha lokuhlala kwakho.
Iilwimi: English, Français, Italiano, Polski, Português, Español, Türkçe
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marzamemi